Misy tokoa ve ny zavatra lazaina ho ‘Soatoavina Eoropeanina’? · Global Voices teny Malagasy
Misy tokoa ve ny zavatra lazaina ho ‘Soatoavina Eoropeanina'?
Nandika (en) i Katrin Zinoun
Voadika ny 10 Desambra 2015 11:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Italiano, Français, srpski, عربي, 한국어, Português, Ελληνικά, Deutsch
Andron'i Eoropa 2008: Mpandray anjara ao amin'ny Kianjan'ny Fampanantenana Eoropeanina. Saripika: Sabitha Saul; nahazoana alalana
Tsy dia vaovao loatra intsony ny fisian'ny hevitra “soatoavina Eoropeanina”, saingy noho ny fisian'ny fanafihana nahafaty olona tamin'ny Novambra teo tao Parisy sy ny firohotan'ny olona tonga ao amin'ny kaontinanta — ary ny fiakatry ny nasionalisma sy ny fankahalam-bahiny mampanahy izay nanaraka izany — dia hita ho nampisy adihevitra indray ny tsirinkevitra.
Misy ve ny fitsipika fototra iraisan'ny firenena 28 mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeanina? Koa raha misy izany dia inona avy izy ireo? Ary mbola mamelona ny idealiny manokana ve i Eoropa?
Nanangana ekipa ny bilaogera alemana Johannes Korten sy ny artista Jochen Gerz hanasana ny Eoropeanina rehetra handray anjara amin'ny diabem-pifaliana am-bilaogy amin'ity lohahevitra ity indrindra. Nanoratra i Korten:
Tao ho ao izay dia nifanontaniana indray ity hevitra ity. Mihamiharihary fa voamariky ny tombontsoa ara-bola sy ara-toekarena ny fisian'izany Eoropa “ofisialy” izany. Ka raha mbola voavahan'ny vola ireo fanamby sy fifandroritan-tombontsoa izany dia mbola “ao tsara” izany hoe Eoropeana izany.
Ankehitriny, an'hetsiny ny olona an-dalana ho ao amin'izany Eoropa izany. Mandositra ady, herisetra ary fampihorohoroana ry zareo na mandositra fahasarotam-piainana ara-toekarena, izay matetika vokatry ny fomba fanjifantsika na tombontsoantsika ara-jeostratejika. Tsy voavahan'ny loharanombola fotsiny irery ny fanamby ateraky ny firohotan'ny olona mitady fandriampahalemana sy fiadanana ao Eoropa. Ampy ny harenan'i Eoropa handraisana ireo olona ireo. Any amin'ny ambaratonga hafa no mipetraka ny fanamby. Resaka kolontsaina. Eo no tena itsapana ilay lazaina matetika ho “Soatoavina Eoropeanina” amin'ny kabary lehibe, na kabary itadiavam-pandriampahalemana izany na amin'ny antony hafa mitovitovy amin'izany.
Gerz ilay artista ao ambadiky ny “Kianjan'ny Fampanantenana Eoropeanina” ao Bochum, Alemaina, izay nokasaina hotokanana amin'ny 11 Desambra 2015. Nanokana ny folo taona farany ho amin'ny famoronana ilay kianja izy, ka ao anatin'izany no hanoratana anaran'olona 14.726 nanao fampanantenana ho an'i Eoropa. Tazonina ho tsiambaratelo ny andraikitra nataon'ny tsirairay ho amin'izany, fa hanehoana ny fampanantenana an'ilay fimaroana tafatambatra an'i Eoropa ny anarany atao sokitra ao anaty kianja.
Ny toera-piaingan'ilay artista dia lisitra roa efa misy ao amin'ny Fiangonan'i Kristy, eo ankilan'ny kianja: ny iray ahitana “fahavalon'i Alemaina” miisa 28 tamin'ny taona 1931 ary ny iray hafa amin'ny matin'ny Ady Lehibe Voalohany. Tian'i Gerz ny hampifangarika azy ireo amin'ny “lisitry ny velona”.
Tohizan'i Korten ny fientanany hanaovana diabem-pifaliana am-bilaogy amin'ireo andiam-panontaniana eritreretin'ny olona maro ao Eoropa amin'izao fotoana izao :
Tao ho ao izay dia mila mahita ny valin'ny fanontaniana maika isika. Mila anaovana izany ny politikantsika, saingy tahaka izany ihany koa ny tsirairay sy isika rehetra. Inona ny fahafahantsika sahaza ho antsika? Inona ny fahafahan'ny hafa sahaza antsika? Tsapantsika sy ankafizintsika ve ny harena tsara ao amintsika miaina ao anaty fiarahamonina demôkraty? Inona ny fanabeazantsika sahaza ho antsika? Ahoana ny ifandraisantsika amin'ny hafa, ao amin'ity Eoropa ity? Mbola misy ve ny zavatra toy ny hevitra iraisana? Hevitra mety ijoroan'ity Eoropa ity, ankilan'ny fanambinana ara-toekarena?
Tian'ny mpisantatra ny diabem-pifaliana am-bilaogy ny hanomboka fifanakalozan-kevitra amin'ny dikan'i Eoropa amin'ny maha-tsirinkevitra azy ho an'ny olompirenena ao aminy. Fantaro bebe kokoa ny fomba handraisana anjara amin'izany amin'ny fitendrena an’ity.
11 ora izayRosia
7 andro izayMakedonia